December 2018 – Trend.com.mm
အချစ်ကို ဖော်ပြတဲ့ အချစ်ဘာသာစကားတွေထဲကမှ အနမ်းအက္ခရာတွေအနက် ကွဲပြားခြားနားတဲ့ အနမ်းတချို့ကို ကောက်နုတ်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ လောကကြီးမှာ လူတိုင်းလိုလို ချစ်ဖူးကြမှာပါ။ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, RelationshipsLeaveaComment on အနမ်းတိုင်းမှာလည်း အဓိပ္ပါယ်ကိုယ်စီရှိတယ်ဆိုတာ သင်တို့သိထားပြီးပြီလား
အခုခေတ်ကြီးထဲမှာ ဆေးဝါးနဲ့လုံးဝမထိတွေ့ရတဲ့ သူဆိုတာခက်ရှားရှားပါ။ လူကြီးလူငယ်မရွေး ဆေးသောက်နေကြရတဲ့သူတွေကြီးပါပဲ။ ဆေးနဲ့လည်းပြတ်လို့မရပင်မဲ့ ဆေးသောက်များရင်လည်း တစ်ဖက်က ကျန်းမာရေးထိခိုက်နိုင်တာ မလို့ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Health, LifestyleLeaveaComment on ဆေးဝါးတွေအရမ်းမှီဝဲရတဲ့သူတွေအတွက် အကျိုးရှိစေမဲ့နည်းလမ်းကောင်းများ
Posted on December 29, 2018 December 24, 2018 by Shun Lei Phyo
အခုဆောင်းပါးမှာတော့ အမျိုးသမီးတိုင်းအတွက် ရင်သားတင်းရင်းမှုရှိစေဖို့ လမ်းညွှန်ချက်တွေကို ဆွေးနွေးပေးထားပါတယ်။ သင်ဟာ သင့်ရဲ.ရင်သားတင်ရင်းစေလိုတဲ့အတွက် နည်းလမ်းကောင်းတွေ ရှာဖွေနေသူတစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ ဒီ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in UncategorizedLeaveaComment on တင်းရင်းလှပစေတဲ့ရင်သားတစ်စုံပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့
Posted on December 29, 2018 December 26, 2018 by Shun Lei Phyo
မိန်းကလေးဆိုတဲ့ အမျိုးက သံယောဇဉ်တွယ်မိပြီဆိုရင် သူများထက်ပိုပြီးသံယောဇဉ်ကြီးတတ် သနားတတ်တဲ့ အမျိုးပါ။ ကိုယ့်ချစ်သူရည်းစားဆိုရင်တော့ပိုလို့ဆိုးပေါ့…အထူးသဖြင့် သိပ်ကို အချစ်ကြီးတတ်ကြတဲ့ မိန်းကလေးတွေဟာ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, RelationshipsLeaveaComment on ဒီလိုအပြုမူလေးတွေကို အချစ်ကြီးတဲ့မိန်းကလေးတွေမှာသာတွေ့ရမှာပါ…
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် ၂၀တုန်းက ထောပတ်သီးဟာ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးမှာရှိတဲ့အသီးတွေထက် အာဟာရအဖြစ်ဆုံး အသီးအနှံအဖြစ် ဂရင်းနစ်စံချိန်တင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ဒါ့အပြင် ထောပတ်သီးဟာ အလှအပအတွက်သုံးမလား၊ကျန်းမာရေးအတွက်သုံးမလား၊စားပဲစားမလား စသဖြင့် » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, NewsLeaveaComment on ထောပတ်သီးကို ဒီလိုနေရာတွေမှာသုံးလို့ရသေးတယ်ဆိုတာ သင်မသိသေးဘူးမှတ်လား?
ဒေါသကြီးတာဟာ မကောင်းဘူးလို့ပြောကြပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။မကောင်းပါဘူး။ဒါပေမဲ့ ဒေါသကြီးတာဟာလည်း ယူတတ်မယ်ဆိုရင် ဒီလိုကောင်းကျိုးတွေရစေပါတယ်တဲ့။ဒေါသကြီးတာဟာ ဘာကောင်းကျိုးတွေရလာစေလဲဆိုရင်… *ကိုယ်ဘာကိုလိုချင်တာလဲ တိတိကျကျပိုသိလာမယ် ကိုယ်ဒေါသထွက်လာတဲ့အခါမှာ တစ်ချက်လောက်သေချာစဉ်းစားကြည့်ပါ။ဘာကိုအလိုမကျဖြစ်တာလဲ၊ပင်ပန်းနေတာလား၊တစ်ယောက်ယောက်ကိုစိတ်တိုတာလား၊ဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုတာ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, NewsLeaveaComment on ဒေါသကြီးတာကလည်း ဒီလိုကောင်းကျိုးတွေရတတ်သေးသတဲ့…
ယောက်ျားသားများ ထောင်ပေါင်းမကရှိကြရာဝယ် ဘယ်လိုပုံစံက မိန်းကလေးတွေ ပုံစံကဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးဖြစ်မလဲ.. တစ်ချို့ မိန်းကလေးတွေကျ ဂျစ်ကန်ကန်ယောက်ျားလေးတွေကို သဘောကျပြီး တစ်ချို » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, RelationshipsLeaveaComment on ရင့်ကျက်တည်ငြိမ်တဲ့ ယောက်ျားသားတစ်ယောက်ကို ဒီလိုတွေ သွားလုပ်လို့မရပါဘူး…
“Along With the Gods “ဆိုရင် မသိတဲ့သူမရှိလောက်အောင် အောင်မြင်နေတဲ့ဇာတ်ကားတစ်ကားပါ။အဲ့ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေအသည်းစွဲကြိုက်ကြတဲ့ EXOအဖွဲ့ဝင် D.O » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Korean, Movies, NewsLeaveaComment on “Along With the Gods 3″မှာ D.O ထပ်ပြီး ပါဝင်လာဦးမှာလား?
ထိတ်လန့်ခြောက်ခြားဖွယ်ရာဇာတ်ကားတွေကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ ” Us” ရုပ်ရှင်ဟာ ခံစားမှုရသသစ်တွေကို ပေးစွမ်းဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Takealook at » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Hollywood, Movies, NewsLeaveaComment on အကောင်းဆုံး trailerလို့ ဝိုင်းချီးကျုးခံနေရတဲ့ Jordan Peele ရဲ့ ”Us” ရုပ်ရှင်
တောင်ကိုရီးယားမင်းသားချော Park Hae Jin ဟာ ဒီနှစ် ခရစ်စမတ် Eve ကိုတော့ အဓိပ္ပာယ်ရှိစွာဖြတ်သန်းခဲ့တယ်ဆိုရမှာပါပဲ။Park » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Korean, Movies, NewsLeaveaComment on Christmas Eve ကို ပရဟိတလုပ်ရင်း ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ မင်းသား Park Hae Jin